mazava plastika hasehonao, mazava tahaka ny fantsom famonosana, clamshell fonosana
Klearfold ® mpiandry Clear fonosana System
Rehefa famokarana boky dia tsy manamarina ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana koronosy tsindrona, ny patented Klearfold mpiandry fonosana mazava rafitra ara-drafitra miavaka manome teti-dratsy, toy ny fahaiza-manavaka, fa amin'ny vola kely. Ny mpitandrina Klearfold fonosana rafitra mazava ahitana mazava plastika hasehonao izany natao mba hanidy ny banga-namorona lovia na plastika clamshell mazava. Vac-trays sy clamshells dia noforonina mba hanaraka ny endriky ny vokatra sy ny hazo fijaliana naniry-sectional profil fonosana.
Klearfold mpiandry mora sy mahomby manome tanana-Mameno ... dia feno ny vokatra any an-vac-lovia sy ny zana-fiangonana eo an-tsary mazava hasehonao plastika. In-miforitra vakizoro eo amin'ny hasehonao anjara iray manokana natao flange ny vac-teny, Fanidiana ny singa tsy manana ahiahy roa miaraka, tsy misy ny filàna manify tombo-kase na ny fampiasana ny Sonic, RF, na ny hafanana fitaovana famehezana.
A ankihiben-notch perforation tao amin'ny takona izany ny mazava dia manome hasehonao plastika tsy manam-paharoa, mora-fanokafana endri-javatra. Fanesorana ny ankihiben-notch ihany koa ny manala ny hidin-trano, mamela ny lovia mba ho mora disengaged avy amin'ny mazava hasehonao.
US patanty Number: 8.936.188
Watch Klearfold mpiambina Fihetsiketsehana